5 Fursado Ganacsi ah oo Kabannaan Gudaha Dalkeenna Hooyo?? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa Maxay Soondo?
Ilhaan Ciise Maxamed, December 22, 2018
Carruurta Tanzania oo Ugu Caafimaad Badan Adduunka oo Dhan
Wajiga quruxda badan ee Soomaaliya?
Ilhaan Ciise Maxamed, January 15, 2020
Afrikaan.so, October 21, 2015
Ilhaan Ciise Maxamed — December 5, 2019
Waxa aan hubaa in gudaha dalka baahiyo Ganacsi oo aad u badan ey kajirto, laakiin waxaa yar dad u soojeedo arrinkaan, dad u soojeedo in ey wax cusub billaabaan, dhallinyaradu wey badanyihiin laakiin in waqtigooda ey buuxiyaan diyaar uma ahan xaqiiqdi.
Haddii aad leedahay diyaar ayaan ahay waana billaabilahaa lakiin duruufo ayaa iheysto jooji walaaca faraha ba’an kugu haaya ee fiiri taariiqda dadka guulaha sameeyay halka ey soomareen. Qaarkood ayaa kaliitay halka aad adigu taagantahay maanta.
5 Fursadood oo ganacsi ayaan halkaan ku soo gudbineynaa, inkastoon anigu horay dalka aanan uga bixin oo waxa aan kahadli rabo eysan ahayn waxyaabo aan dibadda ku soo arkay, laakiin waxa aan hubaa in ey yihiin waxyaabo dalka gudihiisa looga baahanyahay, Ganacsiga loo baahanyahay waa midka guuleysan kara.
Iibinta qudaar nadiif ah
Dalka Soomaaliya 3meelood meel ama kabadanba waa dhul beereed, hadana caasimadda ayaanba laga helin qudaarta cagaaran oo nadiif ah muddo 6 bilood ah sanadkii. Kaliya waxa aan helnaa qudaar muddo 6bilood kayar sanadkii, taasina waxa ey ka muuqataa wajiyada dadka oo laga garan karo in eysan cunin cunno qudaar ku jirto, maxaayeelay qudaarta cagaaran iyo mirahaba waa lambarka koowaad ee cunnooyinka caafimaadka leh.
Dhowr jeer oo aan weydiiyay Hooyadeey, qudaarta waxa ku dhaco oo aan u weyno markasto waliba annaga oo joogno caasimadda dalka hooyo, waxa ey ii sheegtay 3sababood:-
1.Qudaarta waxa ey dhalataa xilli roobaadka oo kaliya, marki uu roobka bato waxaa dhacdo in qudaarta qaarkeed eysan kunoolaan biyaha badan halkaasna waxaa ka’imaanaya in beer dhan oo koosta ahayd ey waxba kasoo go’i waayaan.
2.qudaarta waxa ay beeraleydu soo saaraan gawaari usoo qaaddo magaalada, xilli roobaadka waxaa go’a ama biyo fadhiistaan laamiyadii lasoo marsiin lahaa qudaarta, waxaana ku dhacdo in halkaas ey ku xayirmato qudaartii magaaladana aan lakeenin wax qudaar badan ah.
3.sidookale xilli roobaadka waxaa jiro in ey dhacdo fatahaado, waxa aan ognahay sida ey fatahaadahaasi saameyn weyn ugu leeyihiin dad iyo duunyaba, waxaa laga yaabaa in beerihii oo lagu tabcay ey ku dhacdo fatahaado.
F.G:-wey jiraan qodobo kale aan maskaxda ku haayo laakiin intaan ayaan ku soo koobayaa.
Labadaanyo Casriyeysan ( LOUNDRY)
Caasimadda waxaa ku soo badanaya dhallinyarada goonida uddaggan (iskaabulada), magaaladana waxaa kajiro labadaanyoo-yin yar,qaabka ey ushaqeeyaanna ey keeneyso in dhallinyarada eysan dhar kadhaqan karin. Qaabka aan kuu soo bandhigayo waa in aad sameysaa mid casri ah sida in aad furato xarun qurux badan oo lagu kalsoonaan karo nadaafadda iyo shaqaalaheedaba. Waa in aad sameysataa cinwaan baraha bulshada ah si’aad halkaas uga hesho dhallinyaro kugu soo xirmo.
F.G:aan kuu baaqee wiilasha Soomaaliyeed 95% dhar madhaqan yaqaanaan oo waa loo dhaqaa, marka wiilkii kasoo guura reerkiisa ee meel iskaabulo ku ah orad ayuu kugu soo raadinayaa.
Dharka waa in qofka laga soo qaado gurigiisa looguna geeyo iyada oo lagu xisabinaayo gaari raaca (transportation-ka), qorshahaan waxa uu kuu sahlayaa in qoysaska deegaanka ey kugu soo xirmi karaan.
Ganacsigaan waxa kaliya uu ku hirgali karo waa in qiimaha lacagta lagu jaan gooyaa dadka deegaanka, si’ey u awoodaan lajaan qaadidda qorshahaaga ganacsi.
Xirfadda dhar tolidda ama dawaarka
Harqaanno badan ayaa kajira deegaankeenna, xaqiiqdii aad ayay ubadanyihiin laakiin shaqada laga rabo mahaayaan oo cabashada ayaa badan sababtoo ah marwaliba aad dhar tolotnaysid sida aad ula ballantay si’aan ahayn ayaa laguugu tolayaa tusaale in cabbirkaaga laga gaabiyo ama laga dheereeyo.
Sidookale magaalada dhaxdeeda, dharka suuqa lagu iibiyo waa meelaha ugu ganacsiga fiican oo carwooyinka aad ayaa wax looga gataa, laakiin majirto haba yaraatee naqshad dhar oo Soomaaliya lagu sameeyo oo la-dalban karo, naqshadaha ugu badan ee dharka waxa ey nooga yimaadaan Kenya, maadama halkaasi Soomaali badan ey ku nooshahay oo ey dadkoodii usoo dhiibayaan dharka, kaddibna qofkasto oo ku arko uu dalbanayo, ganacsatadana markaas kaddib ey keenaan isla dharkii.
Haddii aad furato harqaan dharka tola cabbir wanaagsan iyo waqti cayimanna ku soo saaro, gaar ahaan dharka dumarka maxaayeelay dumarka wey ka dhar iibsi badanyihiin ragga.
Sidookale haddii aad ku darsato naqshadeynta dharka waa fursad aad u fiican kana bannaan dalka.
4. Beeraha lagu ordo
Gabi ahaanba majirto xitaa hal beer oo leh waddooyin lagu aalamiiteeyo iyo kuraasman lagu nasto, beeraha nasiinada ayaa kajira dalka, laakiin dadka waxaa ku batay cudurada Macaanka iyo Dhiig-karka marwalibana dhaqaatiirta waxa ey kula taliyaan in ey jimicsi sameeyaan, dadki maheystaan meelo lagu ordo gaar ahaan Dumarka. Beeraha waxa ey soo jiidanayaan indhaha qofki marki uu ordana waxa ey ku fiicantahay in uu ku nasto.
Haddii aad jeclaatay in aad qorshahaan billowdid waxa aan kugu latalin lahaa in aad kala soocdid Dumarka iyo Ragga, maxaayeelay Dumar iyo Rag hal meel kuma wada ordi karaan!
5. Dhaqtarka Maqaarka:
Dhaqtar si qaas ah ugu taqasusay (specialist) cudurada maqaarka ee Soomaali ah, dalka dhaqaatiirta maqaarka ee kashaqeeya aad ayay ubadanyihiin bukaanadana kuma qanacsana, markasto ayaga oo cabanaya ayay isbitaalada katagaan.
Waxaa kale oo jira in badanaa dumarkeenna ey isticmaalaan waxyaabo kiimiko kabuuxdo si ey maqaarkooda u qurxiyaan laakiin nasiib xumo xaqiiqdii qofka waxaa ku dhacay in wajigiisa uu beddelmo in uu bahal u ekaado, aad ayay u fiicnaan lahayd in dhaqaatiirta maqaarka ku taqasusay ey noqdaan kuwa aqoon buuxda u leh waxyaabah dalka kajira ee maqaarka dila. Si’ey macaamiishaada u wanaagsanadaan waxa aad u keeni kartaa oo Farmshiga aad soo dhigi kartaa waxyaabo dabiici ah oo qofka quruxda u siyaadineysa.
Halkaas ayaan ku simeynaa, nabadeey….
Tags: 5 Fursad ee Ganacsi oo kabannaan gudaha dalkeenna:
Next post Dhiig Karka Xilliga Uurka
Previous post Duxdee u Wanaagsan Caafimaadkaaga?